Tunis oo ku biirtay maxkamadda dambiyada Caalamiga ee ICC-da – SBC
Tunis oo ku biirtay maxkamadda dambiyada Caalamiga ee ICC-da
Tunisia:- Dalka Tunis oo ahaa dalkii ugu horeeyey ee uu ka bilowday mudaaharaadka maanta sida weyn dunida carabta u gilgilaya islamrkaana madax carbeed ay xukunkooda ku waayeen ayaa noqay dalkii ugu horeeyey ee woqooyiga Africa ee ku biira maxkamdda dambiyada caalamiga ee ICC-da international criminal court.
Tunis ayaa sidoo kale noqotay dalkii 116aad ee saxiixa nidaamka Roma ee lagu aasaasay maxkmadii ugu horeesay ee caalamka si joogta ah u qaada dambiyada dagaalka ee xarunteedu tahay Lahai.
Sixiixitaanka dukumintiyada laga maarmanka ah si loogu biro maxakamdda dambiyada caalamiga ayaa Tunis waxa ay noqotay mid kamid ah dalalka darafka ka ah heshiiska ICC-da laga bilaabo koowda September 2011.
Warbixin la soo dhigay website-ka maxakamdda ee bogga internet-ka ayaa lagu yiri “ ICC waxa ay soo dhoweynaysaa ku soo biiridda Tunisia taasi oo ah dadaal beesha caalamka ugu jirto in la sooa afjaro kuwa ku kacaya falal dambiyeedyada ugu xun sida xasuuq iyo dambiyo dagaal iyo dambiyada laga geliyo xuquuqda aadanaha” .
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in Tunis ay tahay dowladii ugu horeysay woqooyiga Africa ahna dalka afraad ee xubin ka ah jaamacadda carabta ee ku soo biira maxakamadda dambiyada caalamiga ICC kadib Djibouti , Jusurul Qamar iyo Urdun.
Dublumaasiyin ayaa sheegay in dalka Masar uu kamid yahay dalalka kale ee carabta ee ku fikiraya in ay ku biiraan ICC-da.
Dalalka carabta iyo African-ka ayaa aaminsan in Maxkamdda dambiyada caalamiga ee ICC-da ay tahay mid kamid ah waxyaabaha ay ku adeegtaan reer galbeedka